SysRq: ny lakilen'ny majika izay afaka mamonjy anao amin'ny voina | Avy amin'ny Linux
SysRq: ny lakilen'ny majika izay afaka mamonjy anao amin'ny voina
Sysrq Izy io dia rafitra mamonjy aina lehibe izay mamela anao hiteny amin'ilay rafitra hoe "ataovy izay tianao, fa aza maty." Rehefa lavo ny solosaina dia mety hitohy ny fihetsika asehony amin'ny klavier, saingy tsy afaka manodina ilay baiko noho ny fihoaram-pefy loatra. Noho izany ireo mpamorona kernel Linux nampiharina SysRq ambonin'ny laharam-pahamehana rehetra, ny avereno ny rafitra.
Ireto misy azo atao mitambatra:
Alt + SysRq + R: Apetraho amin'ny maody Raw ny fitendry. Milaza ny rafitra hampidina ny mpamily fitendry rehetra. Raha maty ny tontolon'ny sary, indraindray ny Alt + Sysrq + R dia mamela hanao Ctrl + Alt + F1 ary manokatra terminal hamonoana ny fizotrany mifanohitra amin'ny rafitra. Raha tsy mandeha io dia afaka miroso amin'ny fampiasana ity fitambarana manaraka ity isika ...
Alt + SysRq + S: Ampifanaraho ireo kapila mafy. Toy ny manomboka izao dia mety ny famerenantsika ny solosaina dia tsara kokoa ny milaza amin'ny rafitra ny hitahiry ny angon-tsika ka rehefa boot dia tsy mila manao fsck (scandisk). Eo fotsiny, tokony hanery ...
Alt + SysRq + E: Atsaharo ny fizotran'ny rafitra rehetra, afa-tsy ny init. Akatona ny programa rehetra ary sokafy ny terminal. Raha tsy mandeha izy dia azonao atao ny manandrana manindry ...
Alt + SysRq + I: kIll (mamono) ny fizotrany rehetra afa-tsy ny init. Raha tokony hanao fampisehoana hanakatonana izy dia novonoiny tamin'ny famadihana sy ra ratsy. Ny valiny dia matetika mitovy amin'ny dingana teo aloha, terminal. Raha tsy azontsika atao ny mamaly azy dia tsy maintsy miverina miverina isika. Press ...
Alt + SysRq + U: Umount (esorina) ireo kapila. Tahaka ny amin'ny dingana faharoa dia mitahiry ny angona amin'ny cache izahay, izao dia esorinay hiala amin'ny rafitra izy ireo, mba tsy hianjera izy ireo rehefa manomboka indray. Ary ankehitriny, vao afaka manery ...
Alt + SysRq + B: reBoot (avereno indray). Toy ny fanindriana ny bokotra famerenana, fa tsy miondrika. Mazava ho azy fa very ny angon-drakitra tsy voatahiry rehetra. Raha nampifangaroinao sy namboarinao ny fiara dia antenaina fa tsy ho simba ny rafitra.
Ny mnemonic hahatadidy ny fitambarana fototra dia: Ny fiakarana ny elefanta mahia dia mankaleo tanteraka. Satria tena hadalana ny dikany, mora ny mitadidy ireo teny.
Rehefa rava ny rafitra dia aza kivy. Azonao atao foana ny manandrana manao a SysRq. Amin'izany dia ho afaka hamerina amin'ny laoniny ny rafitra amin'ny fomba milamina ianao ary tsy misy kolikoly data. Raha maty tanteraka ny zava-drehetra, ary tsy mandeha ny klavier, tsindrio ny bokotra eo amin'ny tilikambo, ary apetraka app na apmd - ny rafitra dia hahatakatra mitovy amin'ny SysRq + S, I, B. Araka ny hitanao, ny Windows ctrl-alt-del dia fako raha oharina amin'ny fomba fanarenana efa misy ao amin'ny Linux.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » SysRq: ny lakilen'ny majika izay afaka mamonjy anao amin'ny voina
Carlos Andrés Soto Montiel dia hoy izy:
Tiako kokoa ny fanafohezana «REInicia SUBnormal» 😛
Valiny tamin'i Carlos Andrés Soto Montiel
Jerome Navarro dia hoy izy:
Data tena tsara dia tsara tokoa!
Na dia toa tsy ilaina aza ny fampiasana teny sasany ...
Valiny tamin'i Jerónimo Navarro
JAP dia hoy izy:
Fantatra tamin'ny fanafohezan-teny hafa hoe: HITSANGARAKA aho. Ary ilay andianteny hoe "Nihantona io, HITSANGANA aho ka hampidina azy."
Mamaly an'i JAP
unowos dia hoy izy:
Io no lakilen'ny «Pet Sis» System Request »Request System ...
Mamaly an'i unowos
Chelo dia hoy izy:
Lahatsoratra mahafinaritra Pablo.
Mamaly an'i Chelo
Manana izany ny solosaina rehetra.
Amin'ny solosaina findaiko dia mila manery ny Fn + End ianao
Tokony hazava amin'ny kitendry solosainao izany.
NotFromBrooklyn dia hoy izy:
Inona no lakilen'ny sysrq amin'ny solosaina finday? Heveriko fa tsy manana izany aho.
Mamaly an'i NotFromBrooklyn
pablojota dia hoy izy:
Eny, tsy maintsy ho hitako raha manana fanalahidy diso tafahoatra aho satria matetika tsy ampy rantsan-tànana hanatanterahana izay nataoko: «Ctrl + Alt + Shift + Print + REISUB» xP
Mamaly an'i pablojota
RudaMacho dia hoy izy:
REISUB no fantatro azy (araka ny filazan'i Carlos) fa tsy RSEIUB. Ao amin'ny wikipedia amin'ny teny anglisy dia misy lahatsoratra iray momba an'io ary maro hafa ny fitambarana:
Raha nitahiry ny ovy aho dia apetraho amin'ny ctrl-alt-sup ary mivavaha.
Mamaly an'i RudaMacho
Saul Uribe dia hoy izy:
Fandraisana anjara tena tsara, izao dia fantatro ny fomba fiasa amin'ny asako rehefa lavo ny mpizara. Misaotra amin'ny fampidirana.
Valiny tamin'i Saul Uribe
entany dia hoy izy:
Amiko imbetsaka, miaraka amin'ny akony tsotra amin'ny fametrahana ny kitendry amin'ny manta, dia nanampy ahy hamerina ilay rafitra izany, satria mamerina ny fanaraha-maso ny fitendry ary afaka mamono ny fizotrany avy amin'ny akorandriaka ianao, fa raha tsy vitanao izany, ary ny Tsy dia mamaly ny rafitra, tsara ny fampifangaroana, ary raha tokony hamerina azy ianao dia te-hamono azy, ny lakile dia O, fa tsy B.
Mamaly an'i Carroca
pandacriss dia hoy izy:
Manantena aho ny hahatadidy
Mamaly amin'ny pandacriss
Eny, tsy mety amiko io, raha ataoko eo amin'ny terminal dia hitako:
SysRq: Tsy mandeha ity hetsika sysrq ity.
Ny S ihany no ekeko fa mazava ho azy, izany irery no tsy mamerina ilay rafitra.
Mampiasa Arch amin'ny kernel 3.11.6-1 aho
GABY PATRICIA CABREJOS TORRES dia hoy izy:
Tsara, misaotra amin'ny toro-hevitra
Valio amin'i GABY PATRICIA CABREJOS TORRES
Manana solosaina finday Acer Aspire aho ary azoko atao ny manidy azy amin'ny famafana ctrl + alt +.
Niverina i Damn Small Linux
Box: Lohahevitra kisary vaovao ho an'ny Lubuntu